अब फेसबुक चलाउँदा होसियार ! यी गल्ती गरे १५ लाखसम्म जरिवाना - Deshko News Deshko News अब फेसबुक चलाउँदा होसियार ! यी गल्ती गरे १५ लाखसम्म जरिवाना - Deshko News
अब फेसबुक चलाउँदा होसियार ! यी गल्ती गरे १५ लाखसम्म जरिवाना
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाई गरिने भएको छ । त्यसको लागि सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तयार पारिएको छ । उक्त विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त विधेयकमा साइबर बुलिङ दण्डनीय बनाएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहीत गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने काम गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, घृणा, द्वेष वा अपहेनामा उत्पन्न हुने काम कारबाही गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
विधेयकमा कसुरदारलाई १५ लाखसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । उपसमितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक बिनाकुमारी श्रेष्ठले जानकारी दिईन् । अब उक्त प्रतिवेदन समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरिनेछ ।
पछिल्लो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विकृति बढेको भन्दै सरकारले यसलाई कडाई गर्दै लगेको हो । कानूनले गर्न नहुने वा निषेध गरिएका कार्यहरु पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुँदै आईरहेको सरकारको दाबी छ ।
नेपालमा भएका अभ्यास र प्रयोगका आधारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन मात्रै खोजिएको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न खोजिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनाई छ ।